५ हजार कार्यकर्ता एमालेबाट बामदेवसँगै नेकपा एकिकृत समाजवादीमा प्रवेश ! — newsparda.com
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमालेको सबै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आज (शुक्रबार) पार्टी कार्यालय थापाथली पुगेर राजीनामा दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले पनि गौतमले राजीनामा दिएको जानकारी दिए । गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा पत्र लेखेका हुन् ।
उनले बताय अनुसार एक हप्ता भित्र पाँच हजार कार्यकर्तालाई एमाले छोडने छन् | उनि हरु माधब नेपालको पार्टीमा लाग्ने वा छुट्टै पार्टी बनाउने बारे निर्णयमा नपुगेको बताईएको छ | यसले एमाले लाई फेरी गम्बिर धक्का पुगेको छा
प्रचण्ड-माधबले नमानेपछि एमसीसी पास गर्न ओलीसंग सहकार्य गर्ने तयारीमा देउवा !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउने समान धारणामा छन् । झण्डै तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा सम्झौता टेबल गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
संसदको ठूलो दलको विरोधमा संसद चलाउन सरकारलाई हम्मे पर्नेछ । अर्को कुरा, ओलीको साथ विना एमसीसी पास हुन सक्ने अवस्था छैन र माहोल पनि बन्ने अवस्था छैन । त्यसैले ओलीको साथ देउवाका लागि अनिवार्य बनेको देखिन्छ । https://compaqnews.com/ बाट साभार गरीएको हो ।